AKKAMITTI AKKA ARGAMTAN NUUF HIMA
Feedhiiwwan jijjiiramoo naannoo Twin Cities guddittii akka hubannuuf nu gargaaraa
Fayyadamaa ismartifoonii keenya fayyadamuun hirmaadha
Fayyadamaa ismartifoonii qo’annaa naqadhaa, rMove, akkasumas koodii itti-gahuumsaa keessaniin seena.
Waa’ee jiruu keessaanii qofa deema. rMove imala keessan ni galmeessa akkasumas torbaan tokkoof gaaffii waa’ee imaloota keessanii gaaffadha.
Qorannoo sarara irraa galchuuf armaan gadii 'Seeni' cuqaasaa.
Yookiin yoo bilbila filattan, qo’annoo xumuruudhaf bilbila-bilisaa irratti nuf bilbilaa: 1-888-476-6157.
Yoo koodii itti-gahuumsaa keessaniitiin afeerraa dhabdan maalo nu qunnamaa akkasumas isin gargaaruu ni dandeenya.
Tarreeffamni Amala Imalaa maali?
Tarreeffamni Amala Imalaa qorannoo maatii kan qubsumaa haawasummaa, sochiilee imala guyyaa-guyaanii, fi sarxaalee geejjibaa addaa namoota naannoo Twin Cities guddittii jiraatanii sassaabudhaati. Akkaataa hawaasni itti guddatan, dagaaganii fi jijjiiramoota biroo kan sirna geejjibaa irratti dhiibbaa taasisuu danda’an hubachuuf odeeffannoo kuni dhaabbatoota Karoora naanno’o tii fi naannoo tiif baayyee barbaachisoo dha. Geejjiba amansiisaa fi filannoo imala bu’a qabeessaa sadarka qulqullina jireenyaa fi bu’a qabeessumma dinagdee naannootiif ni gumaachan. Daataan qorannoolee fi gabaasonni dhaabbatoonni akka investimentii geejjibaa qabatamoo dhiheessan, iyyatoota deeggarsa maallaqaa federaalaa baasan, fi fooyya’iinsa feedhiiwwan naannootiif sirritti mijjaawuuf dursa akka kennaniif gargaara.
Qo’annaan Metropolitan Council in partnership with the Minnesota Department of Transportation and the Wisconsin Department of Transportation dhaan liifamee.
Odeeffannoo dabalataa waa’ee qo’annaa kanaatiif, maalo frequently asked questions or contact us keenya daawwadha.
Gaaffiilee? Asii jalqabaa.
Qo’annoon kuni maal ilaallatu?
Namoonnii akkamitti, yoom, essaa, fi maaliif naannoo Twin Cities guddittii keessaa fi tooraa isii imalan caalaatti baruu barbaanna Sarxaalee geejjiba naanno’oo akka hubannu nu gargaaruf akka imala keessan galmeessitan isin gaafataa jirra. Hirmaachuudhaan haawaasaa keessan keessatti fooyya’insoota geejjibaatiif akka karoorsinu nu gargaaruu ni dandeessuu.
Hirmaannaan keessan maatiiwwan akka keessanii karoorawwan geejjibaa naanno’o keessattiu akka bakka bu’aman ni mirkaneessa. Itti-naqaan keessan dhiibbaa guddaan qaba sababni isaatis maatiiwwan muraasa qofatu akka hirmaataniif afeerrame.
Akkamittiin akkan hirmaadhuuf filatame?
Nannoo Twin Cities guddittii keessaa maatiiwwan afeerraman faduuliidhaan filataman.
Eenyuutu qo’annoo kana liifaa jira?
Manni maree Magaalaa Damee Geejjiba Minnesota tii fi Damee Geejjiba Wisconsin dhaa wajjiin gamtaa’uudhaan qo’annoo kana liifeera.
Hirmaachuudhaaf Yeroo hangam takka fudhata?
Qo’annoo dhaaf galmaa’uudhaaf toora daqiiqaalee 10 takka ni fudhata. Al-tokkoo yoo galmooftan, imalota keessan galmeessitanii akka qo’annoo xumurtaniif Qajeelfamoota isiniif kennina. Maatiiwwan imala isaaniii guyyoota 7 ismaartfoonii, rMove, keessatti galmeessan tokkoon-tokkoo guyyaatti imala isaanii gabaasuudhaaf hamma daqiiqalee 5-10 tokko itti fudhata. Maatiiwwan imala isaanii sarara irratti yookiin bilbilaa isaanirratti galmeessan lakkoofsa maatii tokkorratti imala isaanii kan guyyaa tokkoo galmeessuudhaaf daqiqaalee 10 itti fudhata.
Hirmaachuu kotiif maaliin argadha?
Yoo maatiin keessan fayyadamaa ismartifoonii, rMove, fayyadamuun hirmaatan tokkoon tokkoo ga’eessootaa kaardii kenna ni argatu (fkn. maatiin ga’eessoota lama qaban kaardii kennaa lama argatu). Maatiiwwan imala isaanii sarara irratti yookiin bilbiluudhaan gabaasan kaardii kennaa tokko qofa argatu.
Yoon heedduu hin imalle hoo maali?
Hammi imalaa kamiyyuu (yoo imala tokkollee hin godhin) geejjiba imala naanno’o karoorsuudhaaf nu gargaarsa. Imalli gabaabaan akka saree deemsisuu akka lakkaawaman hin irraanfatina.
Waytii qo’annoo amaloonni geejjibaa kiyya amaloota geejjibaa baramoo yoo hin taane hoo maali?
Sun rakkoo hin qabu – ammallee nuti akka hirmaattaniif isin kakaasna. Akkasumas nuti waa’ee amaloota imalaa keessan baramoo, waggaa darbee imaloonni keessan akkamitti akka jijjiiramee fi aakkaataa gara fulduratti ittiin imala jettanii yaaddan isin gaafanna.
Fayyadama ismartfoonii qo’annoo rMove akkaan fayyadamuuf afeerrameetiin jira. Akkamitti hojjeta?
Eraga rMove buufattanii galmooftan booda, jireenya guyyaa guyyaanii keessan wayta itti fuftan rMoven imaloota keessan kan torbaan tokkoo ni galmeessa. Tokkoo tokko guyyaatti qorannoo gabaabdu guyyaa guyyaanii kan waa’ee amaloota imalaa keessanii fi qorannoo imalaa waa’ee tokkoon tokko imala gootanii akka xumurtan ni gaafatamntu.
Iccitiin dhuunfaa kiyyaa akkamitii eeggama?
Nuti iccitummaan, amanamummaa fi eegumsa odeeffannoo dhuunfaa keeessanii eeguuf kutatoodha. Itti-gaafatamummaa kana akka malee jabeessina. Yoo seeraan gaafatame malee odeeffannoo dhuunfaa isin irraa sassaabnu hin saaxillu yookiin qoonnu. Imaammanni iccitii-dhuunfaa keenya odeeffannoo akkamitti akka sassaabnuu fi eegnu akka hubattan isin gargaaruuf kan yaaddame dha. Sanada iccitii dhuunfaa qo’annichaa dubbisuuf MSPtravelstudy.org daawwadha.
Bu’aalee qo’annoo akkamitti hojiirra oole?
Bu’aalee qo’annoo karoorsitoonni naanoo tii fi naanno’a dha akkamitti imallii guyyaa-gara-guyyaa naannoo guutuu keessaa garaagara akka ta’e akka hubatan gargaara. Teknoolojiwwanii fi karaan namoonni itti daddeeman jijjiiramu itti fufeen, bu’aaleen qo’annoo dhaabbatoota akka isaan investimantiilee geejjibaa qabatamoo dhiheessan, iyyatoota deeggarsa maallaqaa federaalaa baasan, fi fooyya’iinsa feedhiiwwan naannootiif sirritti mijjaawuuf dursa akka kennaniif gargaara.
Yoo gaaffiin waa’ee qo’annoo yookiin akkaataa ittiin hirmaattanii qabaattan maalo nu qunnama. Nuiti gargaarsaaf as jirra.
Gaaffii deeggarsaa galchaa
Maqaa yookiin qubeelee jalqaba maqaa*
Akkamitti gargaaruu dandeenya?*
Gaaffii keessan galchuu irratti rakkootu ture. Maalo mata-dureen barbaachisoon armaan olii hundi guutamuu isaanii mirkaneeffadhaatii irra deebi’uun yaala.
Galatoomi! Dhihootti isin qunnamna.